ခင်ဗျားတို့တကယ်သနားတတ်တယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ကိုလည်း ကယ်တင်ပါ…တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခင်ဗျားတို့တကယ်သနားတတ်တယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ကိုလည်း ကယ်တင်ပါ…တဲ့
ခင်ဗျားတို့တကယ်သနားတတ်တယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ကိုလည်း ကယ်တင်ပါ…တဲ့
Posted by နွေဦး on Aug 23, 2013 in Creative Writing, Think Different | 39 comments
ကယ်တင်ရှင် အလိုရှိသည် မေတ္တာထားပါ
သတ္တဝါတွေအပေါ် ကြင်နာသနားတတ်ကြတဲ့ သူတွေကို မကျေမနပ် ပြောခွင့်ရမယ်ဆို ပြောချင်ပါတယ်။
ကြင်နာသနားတတ်တာတွေက သတ္တဝါတွေ တိရစ္ဆာန်တွေ အမျိုးအစားကော ခွဲခြားကြသေးလား ။
ကြင်နာသနားမှုအတိုင်းအတာ အဆင့်ဆင့်တွေကော ခွဲခြားသေးသလားပေါ့ ။
အသတ်ခံရတော့မဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ကို ညှာတာသနားပြီး ဇီဝိတ ဒါန အသက်ကယ်ကြတာကော
သတ္တဝါအဆင့် တိရစ္ဆာန်အဆင့်ခွဲခြားပြီး ကယ်တင်တာမျိုးကောရှိကြသလား…။
အချိန်ကာလ ဒေသအရပ်ပေါ်မှာကော ခွဲခြားပြီး သနားညှာတာ ကြင်နာစွာနဲ့ကယ်တင်တတ်ကြတာလား…။
မခွဲခြားဘဲ မျှမျှတတ သတ္တဝါတွေကို ကြင်နာသနားတတ်တဲ့သူတွေကယ်တင်မဲ့သူတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့
ပြောရရင် မွေးကထည်က သေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ဘယ်အချိန် သေရမယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးမွေးလာခဲ့ကြတာပါ ။
တနေ့တနေ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေး အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေနေကြရတာမို့
မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းတွေက တကယ်မတုန်လှုပ်တော့တဲ့ကောင်တွေပါဗျာ။
ဒီလိုကောင်တွေအတွက် သနားညှာတာပေးဖို့ ကြင်နာပေးဖို့ ကယ်တင်ပေးဖို့ပြောမယ်ဆိုတော့ အံ့သြစရာဖြစ်နေမလားဘဲ..။
မွေးလာကထည်းက အချိန်တန်သေရမယ် သေပြီးတဲ့အခါ ငါ့အသားကို လူတွေစားကြမယ် ။
ငါ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းတွေဟာ လူတွေအတွက် အကျိုးရှိလို့ ငါ့ရဲ့သေဆုံးခြင်းဟာ ဂုဏ်ယူစရာ..လို့တွေးမယ်ဆို သူရဲကောင်းစိတ်တောင်ဝင်လာမလားဘဲ..။
ခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်လို့ …
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကြင်နာသနားမှု ကယ်တင်မှု ကို တောင်းတမိတာပါ..။
သင်္ကြန်လို အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ ဇီဝိတဒါန ဆိုပြီး နွားသတ်ရုံ ရောက်တော့မဲ့ဆဲဆဲ
နွားတွေ နအိုတွေကို ကယ်တင်ပြီး ဘေးမဲ့ခြံတွေမှာ လွှတ်ကြတာဆိုတဲ့သတင်းတွေ
ငါးလွှတ်ပွဲတွေ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလုပ်ပြီး ကြင်နာသနားမှုတွေကို ဖေါ်ပြနေကြတာတွေ…
စည်ပင်သာယာက ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုလား
လေလွင့်ခွေးတွေကို ဖမ်းထားတဲ့ ခွေးတွေကို
လူတွေစားဖို့ရာ ဂုဏ်ယူစွာ မသေကြရတဲ့
တိရစ္ဆာန်တွေ အတွက် စောဒကတက်လို့
အော် ..ကယ်တင်စေချင်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေလား…
ကြက်တုတ်ကွေး H5 N1 ဖြစ်နေတဲ့ ကြက်တွေ
ကုစရာဆေးမရှိလုိ့ ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပစ်ထားခံရတဲ့ကြက်တွေ
ပိုဆိုးတာက အရှင်လတ်လတ် ဆာလာအိတ်ထဲထည့်ပြီး
ကြင်နာစွာနဲ့ ကယ်တင်သင့်ပါတယ် ..
သူတို့မျိုးနွယ်တွေရဲ့ အသားကို စားခဲ့ကြဘူးသူတိုင်း
ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ ပြောရရင်တော့ ရှော့ရှိတယ် အကိုကြီး…
ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အစုလိုက်အပုံလိုက် ဖျက်ဆီးတာကတော့ လုပ်ရမှာပဲလေ
ဟိုတလောကတောင် Detroit (USA) မှာ ခွေးလေ ခွေးလွင့်တွေ မင်းမူနေလို့
ကြင်နာသင့်တာကြင်နာ၊ သုတ်သင်သင့်တာတော့ သုတ်သင်မှ မျှတပေမပေါ့…
လူတွေစားသုံးဖို့ တိရစ္ဆာန်တွေကို မသတ်ခင်၊ မနှိပ်စက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
ကြုံလို့ပြောရရင် သူမအိမ်ကကြောင်ကြီး (ရွာထဲက ကြောင်ကြီးမဟုတ်)ကို…
အိုမင်းပြီး ဝေဒနာခံစားနေရတာ မကြည့်ရက်လို့ ညှင်ညှင်သာသာ အသက်ထွက်အောင်
တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကို ဆေးထိုးသတ်ခိုင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်မကြီးကို မြင်ဖူးတယ်…
မြန်မာပြည်မှာလူအသတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့.. အသဲရောင်အသားဝါဖြစ်စေတဲ့.. ဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း.. ကယ်သင့်တာပေါ့နော…
ကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးထိုးရင်.. အဆိပ်မရှိတော့တဲ့..ဗိုင်းရပ်စ်တွေက.. အဆိပ်ရှိပိုးတွေကို.. မျိုးမအောင်အောင်..ဘ၀ပြောင်းဖြစ်တာဗျ…
မှတ်ချက်။ ။ ပြောမရဘူး.။ ဘုရင်ခေတ်က.. ဟိုပုဂိုလ်ကြီး.. ခြေထောက်လောက်တက်နေတာ.. လောက်တွေသေမှာစိုးလို့ဆိုပြီး.. ဆေးမထည့်ခိုင်းပဲ..တကယ်လုပ်တာဗျ…
ပြောမရဘူး.. အင်း.. ပြောမရဘူး…
မင်းတုန်းမင်းကြီးဆိုလည်း သူ့ခေါင်းမှာတွေ့တဲ့သန်း တွေကို မသတ်ဘဲ
မိဖုယားတစ်ယောက် ၂ကောင်ကျစီ ခွဲတန်းနဲ့
ခေါင်းပေါ်မွေးစေပြီး သန်းတွေကို ကယ်တင်ဖူးတာဗျ ..
ငိုချင်ရင် လက်တို့ ဖြစ်ရတယ်
ဒီရက်ထဲ the voice မှာ လေလွင့်ခွေးတွေရှင်းဘို့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံး ၀ိုင်းသမ ကြတာ ကြည့်ပြီး တော်တော်လေး စိတ်လေနေတာ
အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး ပြောတာကို ဘာမှ မပြောလိုပေမဲ့
ငါ တို့က ခွေးချစ်တယ် ခွေးတွေကို လာ ထိတာ လက်မခံဘူး ဆိုတာတွေက အများစု ဖြစ်နေတယ်
ခွေးတွေကို သနားတာ ချစ်တာ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိ တိရစ္ဆာန်တွေကို ကယ်တင်တာ ကောင်းပါတယ် ပေါ့
အဲဒီခွေးတွေ နေ့စဉ် ကျွေးမွေး ထိန်းသိမ်းရမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးရမှာ မျိုးပွားလာကြမှာ နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စတွေက အများကြီး
မြန်မာပြည်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဘို့ အတွက်ကို နေရေး စားရေး ပြသနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူသားတွေက အများကြီး၊ သူကြီး တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲက ခွေးသေရှိတဲ့ အမှိုက်ပုံ ဘေးက ကလေး ငယ်လေး လို ဘ၀ တွေ အများကြီး အဲဒီလို လူတွေကို ရော ကယ်တင် မပေးချင်ကြဘူးလား
ခွေးလေ ခွေးလွင့်တွေကို ကယ်တာ ကောင်းပါတယ်
လူတွေကို ကူညီနိုင်ရင် ကယ်နိုင်ရင် ပို မကောင်းကြဘူး လား ဗျာ
(ခွေးတွေကို ကယ်လို့ ခွေးတွေက စားမရဘူးဗျ
ကြက်တွေကိုကယ်ရင်စားရတယ်…မယုံရင် ဦးဦး ရဲကြီးတို့ကိုမေးကြည့်..။)
ခွေးသတင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ် …. ။
အဲ့ဒီမှာ ဘာတွေ့လဲ ဆိုလျှင် … ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးသယောင် အရေးသားမျိုး ဖတ်လိုက်ရတယ် … ။
ခွေးလေ ခွေးလွှင့်တွေမှာ ခွေးရူးရောဂါပိုး ဘယ်လောက် %တွေ့တယ် စသဖြင့်ပေါ့လေ … ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် …. စာအရေးသားကြောင့်လား ၊ သတင်းကို တိတိကျကျ မဖော်ပြလို့လားမသိဘူး .. လက်ခံ နိုင်ခြေ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် … ။ အဲ့မှာ တဆက်တည်းရေးထားတာက .. ဒါကြောင့် လမ်းဘေး ခွေးတွေကို သူတို့ သုတ်သင်ပါမယ်ပေါ့လေ … အဲ့အတွက် စည်ပင်အင်အား တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ကြောင်း တခြားသော အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ အကူညီ ရယူလိုကြောင်း စသဖြင့် ဘာညာ ဘာညာပေါ့ … ။ အမဲသား ကျွေးတဲ့ နည်းက ခွေးတွေက လည်ပြီး မစားတော့ကြောင်း မေ့ဆေးပေးပြီး မသေမချင်း ရိုက်သတ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းမျိုး ထည့်ရေးထားသေးတယ် … ။ စာဖတ်ရင်းတောင် ဒေါသထွက်မိတယ် ….. ဇောင်းပေးဖော်ပြတာကနေအတွင်းစိတ်ကို မြင်နိုင်ပါတယ် ။
ဘယ်သူက ဘယ်လို သုတေသနပြုသလဲဆိုတာအကျယ်တ၀င့်ဖော်ပြဖို့မပြောနဲ့ လူဗြိန်းနားလည်အောင် မရေးသားထားပဲ … လမ်းဘေးခွေးတွေမှာ ခွေးရူးရောဂါပိုး % ရှိတယ်ဆိုတာ အတပ်ပြောရအောင် ဗေဒင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ … ။ (ဗေဒင်ဆရာဆိုတိုင်း မမှန်တတ်ပါဘူး ) ။
အဲ့သတင်းစာက မဆင်မခြင်ရေးတဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုလျှင် .. ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာဖတ်သူကို တွေ့သမျှ ခွေးကို ကြောက်စိတ်ဝင်စေပါတယ် … ။ အဲ့မှာပဲ … အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ သာမန်ခွေးတောင် ထမင်းမကျွေးတော့သူနဲ့ ရိုက်လွှတ်သူနဲ့ စုံပလုံစိနေတာပဲ .. ဒီလိုအခြေနေကြောင့်လမ်းပေါ်မှာ ခွေးတွေ ပိုများလာမယ် …. ။
အန္တရာယ်ရှိလို့ သုတ်သင်မယ်ဆိုလည်း လက်ခံလောက်စရာ အချက်လက်တွေထောက်ပြသင့်တာပါ … ။ အခုဟာက ခွေးရူးရောဂါရှိတယ် ဆိုပြီး ရိုက်သတ်ကြ ပြီးတာနဲ့ အသာနွှင် နေလှမ်းပြီး အရက်ဆိုင်ပို့လို့ဝင်ငွေတိုးတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ဖန်တီးနေကြတာ … ။
အိမ်ခြေမဲ့ ခွေးတွေအတွက် တိမွေးကုက လူတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေ စုပြီး တည်ထောင်ထားတဲ့ သံလျှင်ဘက်မှာ ခြံရှိတယ်လို့ သတင်း ကြားထားပါတယ် ။ အခွင့်ခါသင့်ရင် သွားကြည့်ပါဦးမယ် … ။
ဟက်ကဲ့ ..အန်ကယ် လူတိုင်းကို နီတို့ အသား မစားနဲ့ … အရွက်ပဲ အပင်းစို့ဂျလို့ သွားပြောရင် …တမီးကို ဂေါက်သီးလားလို့ ၀ိုင်းပြောကြမယ်ထင်တယ် … ။ သဂျီးလေသံအရဆိုလျှင်တော့ .. တိရိစ္ဆာန်(စားလို့ရတဲ့) ဖြစ်လာတာကပဲ စားဖို့အခြေနေ ဆိုတာမျိုးကိုး … ။ သူများကို ပြောလို့ မရတဲ့ အနေထားမှာ ကိုယ်တိုင် တကိုယ်စာလေး … တတ်နိုင်သမျှ လျော့စား ဖို့ပဲ စိတ်ကူးမိပါတယ် … သတ်မယ့် တိရိစ္ဆာန်ဆိုပေမယ့် မသေ မရှင် ဒီလို ကြီး တွဲလောင်းချထားတာကိုတော့ မနှစ်မြို့ပါဘူး … ။ ဒါကလည်း ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းပါပဲ ။
သတ္တဝါတွေကို သနားလို့ ကယ်မယ်ဆို
စားလို့ရတာလေးတွေ ဦးစားပေး ကယ်စေချင်သာပါ ။
ဒီကိစ္စက ပြောဖို့ ခက်တယ်ဂျ ..
ဒါမယ့် တစ်ခုဒေါ့ ချိဒယ် …
လူဒွေဂ သူညားလုပ်ရင် လိုက်လုပ်ဒတ်ဒယ် …
ဥနွေဥ ဂျီးက စပီးဒေါ့ ကြက်လွှတ်ပွဲ ဆိုပီး လုပ်ပလိုက် …
ဒါဆို နောက်လူဒွေလည်း အဟုတ်ထင်ပီး လိုက်လုပ်လာလိမ့်မယ် ..
ဂလိုနဲ့ ကျာတွားဒေါ့ ထုံးဒမ်းစင်လာ ပွဲတစ်ပွဲ ဖစ်တွားရော …
ရဲစခန်းရှေ့တို့ ကာရာအိုကေရှေ့တို့ နိုက်ကလပ်တို့မှာ
သိကြားမင်းကို စာရင်း တို့ထားပေးပါရန်….
နတ်သမီး ရှုံးတယ်လို့ ကြားမိလို့ပါ
ကျုပ်တော့ ကျုပ်ရှေ့မှာ မြင်နေရရင်တော့ ကယ်မိချင်ကယ်မိမယ်. ။မမြင်ကွယ်ရာမှာဆိုရင်တော့ ဆော်ရီးပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ကြားသား၊မြင်သား မစားပါ။ အကုသိုလ်ဝင်လို့ပါ။
တချို့ကျတော့လည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးမှ..ချိုတယ်ဆိုဘဲ ။
အပေါ်ကလူတွေ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောသွားကြတာ မှတ်သားနာယူရပါတယ်။
ကျုပ် နားမရှင်းတာလေးတစ်ခုရှိလို့ တစ်ယောက်ယောက်ကများရှင်းပြနိုင်မလား အရပ်ကတို့….
အဲသည် ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို ကယ်တင်တယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ
ကယ်တဲ့သူက သူကယ်တဲ့ခွေး (တွေ) ကို သူ့အိမ်ခေါ်သွားသလား … ဆိုတာရယ်
ကယ်တဲ့သူက သူကယ်တဲ့ခွေး (တွေ) ကို တစ်သက်လုံးကျွေးမွေးထားမှာလား … ဆိုတာရယ်
ကယ်တဲ့သူက သူကယ်တဲ့ခွေး (တွေ) သူများကို အန္တရယ်မပြုအောင် (ဥပမာ ကိုက်တာ၊ လိုက်ဆွဲခြောက်လှန့်တာ)၊ အနှောက်အယှက်မပေးအောင် (ဥပမာ ဟောင်တာ၊ အူတာ၊ လူအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေမှာအညစ်အကြေးစွန့်တာ)
တာဝန်ယူမှာလား …. ဆိုတာရယ်
ကိုယ်ချစ်တဲ့အကောင်လေးကို ကိုယ်ကတော့ကယ်ပြီး သူ့တာဝန်ကိုတော့ သူများခေါင်းပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်
ကယ်တယ် လို့ မခေါ်ထိုက်ပါကြောင်း……။
အခြား ဆီလျှော်တဲ့စကားလုံး တီထွင်သုံးစွဲ သင့်ပါကြောင်း…..
“ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ် သနားနည်း”နဲ့ သနား(ချင်ယောင်ဆောင်)ကြတာလို့… အမည်ပေးချင်ကြောင်း…
ထမင်းမကုန်အောင်ချက်ပြီး လမ်းဘေးပုံကျွေး မယ့်အစား
ထမင်းလျှော့ချက်၊ ဆန်လျှော့ဝယ် ကြရင် ဆန်ဈေးလဲကျ ၊ ပိုလျှံတဲ့ဆန်တွေလဲ ပြည်ပပိုရောင်းနိုင်မယ်လို့
စေတနာမှန်နဲ့ ကယ်သင့်ကယ်ထိုက်သူတွေကို ခွဲခြားပြီး
သများတကာ နဲ့ မတူအောင် မန့် ရရင်ဖြင့် ………
သံသရာကြီးထဲ က လွတ်အောင် ကိုရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ် ဖို့ သတိမရ ကြဘူး မဟုတ်လား။
သံသရာထဲ ဒီလို ကြက် ၊နွား၊ ခွေး၊ ဝက် ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်သူ အတိအကျ သက်သေပြနိုင်သလဲ မသိ။
ပြနိုင်ရင်တော့ ဝဋ်လည်မှာ ကို မှန်းရမ်းပြီး မစိုးရိမ်ရတော့။
အခုတော့ 0.01 % ဘဲ ရှိဦး။
အချိန်မရွေး အဲဒီ အကောင်တွေလို တစ်ကွေ့ကွေ့ ဖြစ်နိုင်တာ ကလား။
(ကြုံတုန်း ဆရာမကြီး လေသံဖြင့် သတိပေးလိုက်သည်)
ဒါပေသည့် တစ်ခါတစ်ခါ အိမ်ရှေ့မှာ လမ်းသလား နေတဲ့ ကြောင်တွေ ကြည့်ရတာတော့ အင်မတန် လွတ်လပ်အေးချမ်း ပုံ ရတာ နော။
လျှောက်နေတာများ။ ဟန် နဲ့ ပန် နဲ့။
ခွေးတွေလိုလဲ ကြိုးချည် မခံရ။
စားချင် အိမ်ပြန်စား။ ပြီးတော့ လမ်းသလား။ ဇိမ်ဘဲ။
အရီးရေ.. ငယ်ငယ်တုန်းက တိရစ္ဆာန်တွေကို လွှတ်ရင်
“နင့်အသက် တခါလွှတ်.. ငါ့အသက်ဆယ်ခါလွတ် “ဆိုပြီး
အသေခြာတွေးတော့ ဝဋ်ရှိရင်တော့ ခံကြရတာပါဘဲ..။
သူများအသက်ကို ကယ်ကောင်းပါတယ် ။သူများအသားကို ရှောင်ကောင်းပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ မကယ်နိုင် မရှောင်နိုင်လို့ ငါ့အလှည့်ကျရင်တော့ …ဘယ်လိုဆိုပြီး တွေးပူရင်တော့
ဝဋ်မလည်သေးခင်ကတည်းက အပူမီးက စခံရဖို့ဘဲရှိပါတယ် ။
သွားတဲ့အချိန်မှာ သွားရင် သွားတယ်မှတ်…
လောဘ ဒေါသ တွေမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆို ..
(ဆရာမကြီးလေသံအား ဓမ္မကထိကလေသံဖြင့် ဖြေကြားလိုက်ပါသည်..ဟားဟား)
ရွာထဲ မ၀င်တော့ဘူးလားလို့ တွေးနေတာ.. ဂရုထဲမှာ လင့်ကလေး တွေ့လို့ လိုက်ကြည့်ရင်း ကမန်းတွေ ဖတ်ပြီး ရေးချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ ၀င်လာခဲ့ပြန်တယ်..
ခွေးလည်း အသက်နဲ့. ကြောင်လည်း အသက်နဲ့ နွား ဆိတ် ၀က် ဘဲ ကြက် အကုန် အသက်နဲ့ ပဲကွ..
မေတ္တာထားတယ် ဆိုပြီး ကွက်ကျားမိုးတော့ မရွာကျပါနဲ့.. အဟမ်း အဟမ်း.. ခွေး မဟုတ်တဲ့ အမျိုး မတူတဲ့ အကောင်လေးတွေ အတွက် ရှေ့နေလိုက်ပေးချင်ပါတယ်..
အားလုံးပဲ.. သတ်သတ်လွတ်စားကြပါ.. ယခုလို မိုးတွင်း ကာလ ဆိုရင်တော့ ရှင်းမနိုင်လောက်အောင် ပေါက်နေတဲ့ နွယ်မြက် သစ်ပင်တွေ ပေါပါတယ်..(စားနပ်ရိက္ခာ ပေါများခြင်း) အဟမ်း အဟမ်း..
ပြောရရင်တော့ လွန်ရာကျမယ်.. အလကားနေရင်း အကုသိုလ် စကားပြောသလို ဖြစ်မယ်.. တလုပ်ပြည် ပို့မည့် ခွေးတွေ သေအဲ့ဆဲဆဲ တကောင် ၇၀၀၀ နဲ့ လိုက်ကယ်ပေးတာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်တဲ့.. ခွေးလေ ခွေးလွင့် ပိုင်ရှင်မဲ့ ခွေးကလေးတွေ မသေတော့လို့ ၀မ်းသာ စရာပေါ့..
ဟိုရက်က ခွေးရာသီ ရောက်ပြီ နဲ့ တူတယ်.. ခွေးတွေ ဖိုက်တင် ချ နေကြတာ.. ၂ကောင် ကို ၁ကောင် က မနာလို ဖြစ်ပြီး အော်လိုက် ကိုက်လိုက်.. အဲ့လို နဲ့.. ခွေး ရန်ပွဲတွေ ဆူညံနေတာပဲ.. ၂ရက် ၃ရက်လောက်နေတော့ သတိထားမိတော့.. ခွေးသံ မကြားတော့ဘူး.. တပည့်တွေက ပြောတယ်.. မနက်စောစော စီးစီး ခွေးတွေ အများကြီး သေနေတာ တွေ့ပါတယ်တဲ့..
အမဲလုံး ပစ်ပြီး သေသွားတာ ပြန်ကောက်ပြီး အမဲခြောက် ဆိတ်ခြောက် အနေနဲ့ ညာရောင်းသူ လက်ထဲ ရောက်မှာ ထက် စာရင်တော့ တလုပ်ပြည်မှာ တကောင် ကို ၂သောင်း၁ထောင် လောက်ပေါက်တယ် ပြောတယ်.. ဒီမှာ ထက် စာရင် ဟိုမှာ က တန်ဖိုးရှိရှိသေပြီး လူတွေ ဘေး မဖြစ်ဘူးလို့ တွေးမိတာပဲ.. (အကုသိုလ်တွေ.. အကုသိုလ်တွေ.. သူများ အသက်တောင် နေရာချ ချင်သလိုဖြစ်နေပြီ။)
ခွေးတွေကို ဖမ်းပြီးရောင်း အမဲလုံးပစ်.. လုပ်နေကြတာတောင် ခွေးအကောင်ရေ မလျော့သွားဘူး။ အမေ အိမ်မှာ နေတုန်းကတော့ မသိသာဘူး ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ကိုယ်နေမှပဲ လမ်းထဲမှာလည်း ခွေးတွေ က အများကြီးပဲ.. ညညဆို သူတို့ ဂီတ သံစဉ် တပိုဒ်လောက်တော့ နားငြီးအောင် ခံစားပြီးမှ အိပ်ရတယ်..
ခွေးတွေ ကို မမုန်းပါဘူး.. အမြင်လည်း မကတ်ပါဘူး.. သူတို့လေးတွေ မျက်နှာငယ်လေးတွေ နဲ့ အိပ်နေတာ ကို ကြည့်ပြီး သနားမိပါတယ်.. ညမှောင်ချိန် အုပ်စု တောင့်ပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့ မျက်နှာ မငယ်တော့ဘူး မာန်ချီပြီး ကိုက်ကြ ဆွဲကြ နဲ့ ကြောက်ဖို့တော့ ကောင်းတယ်။
ဦးပါ ပြောသလို ကယ်လာတဲ့ ကောင်တွေရဲ့
နောက်ပိုင်းကိစ္စကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုတာဝန်ယူကြမလဲနော်..။
ဦးဦးနွေရဲ့ အတွေး လေးကို ဖတ်ပြီး
ကျွန်တော်မေတဲ့ ကျွန်းကလေး မှာတော့
နွား သေရင် အသားကို မစားပဲ မြေမြှုပ်ပစ်တဲ့
အလေ့အထလေး ရှိတာ သတိရသွားတယ် ။
အင်း မရောက်တာ ကြာပြီဆိုတော့
အဲဒိ အလေ့အထလေး ရှိသေးလားးး
ဒါပေမဲ့ အခြားအရပ်က လာရောင်းတဲ့ အမဲသားတော့ ဝယ်စားကြမယ်ထင်ပါရဲ့..
ခွေးတွေကြက်တွေ ကယ်တာထက် ဦးစားပေးပြီး လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါကြောင်း။
မပျက်မစီးအကောင်းပတိရှိနေသေးသော ကလေးပေါက်စနများကို မပျက်စီးအောင်ကယ်တင်စေလိုပါကြောင်း
(၀ုန်း ဒဒုန်းဒုန်း ဗြုန်း အုံးအုံး ……
၀ုန်း ဒဒုန်းဒုန်း ဗြုန်း အုံးအုံး ……၀ုန်း ဒဒုန်းဒုန်း ဗြုန်း အုံးအုံး ……
၀ုန်း ဒဒုန်းဒုန်း ဗြုန်း အုံးအုံး ……)
မပျက်မစီး အကောင်းပကတိ ရှိနေသေးသော
ကျုံးနဘေးက ဂန်ဒူး များကိုလည်း
ဦးဦးရဲကြီးတို့ရဲ့ နှိပ်စက်ခြင်းမှ ကယ်ဆယ်သင့်ပါကြောင်း….
ပြေးပြီ..တက်ဂလောက် တက်ဂလောက်…..(ဂီ့ ရဲ့စီးတော်မြင်းဖြင့်..)
ပြောပြီးကုန်ကြပြီး.. အမှန်အတိုင်းပြောရင်..အဲဒီလမ်းဘေးကခွေးတွေကိုစိတ်ပျက်မိတယ်.. အညစ်အကြေးတွေကိုရှောင်ရတာနဲ့… ကလေးသားပေါက်ချိန်လိုက်ဆွဲတာနဲ့.. သူတို့ရာသီမှာ လမ်းပေါ်အပြည့်မာန်ဖီနေကြတာ..ကိုယ့်မှာ တကယ့်ကိုအသင့်အနေအထားသွားနေရတယ်.. သနားသူတွေကလည်းကျွေးသာကျွေးကြတာလေ..အကိုက်ခံရတော့..ဒီတိုင်းလည်းမနေရဲ.. အနည်းဆုံး ၈သောင်းကျော်ကုန်တယ်.. ကိုယ်တိုင်မထိသေးပေမယ့် အမျိုးထဲမှာတင် ၄ယောက်ရှိသွားပြီး.. မစားရမသောက်ရကုန်သွားတာ.. ပိုက်ဆံလေးအဲလောက်ကို ကိုယ့်အသက်နဲ့လည်းလောင်းကြေးမထပ်ရဲတော့ ကုန်ရတာပေါ့
တချို့က ခွေးဝဲစားမှ သနားတတ်ကြသေးတာ..
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးတွေက ဝဝလင်လင် စားကြရတယ်ဆိုဘဲ..။
တကယ်တန်းတော်တဲ့အစိုးရဆိုရင်… မြန်မာ့ခွေးလေလွင့်တွေအပြင်.. မြန်မာခွေးတွေကို.. စနစ်တကျ ခြံကြီးတွေနဲ့..မွေးမြူပြီး.. ခွေးသားစို/ခြောက်/ကြပ်တင် စသဖြင့်လုပ်လို့.. ကိုရီးယား၊စိနပြည်တွေကို တင်ပို့ရောင်းချဖြစ်အောင်..ချေးငွေတွေ.. ပညာရပ်တွေထောက်ပံ့ပေးသင့်တာပေါ့…။
အိပ်စ်ပို့ အခွန်ကရတဲ့ငွေတချို့နဲ့.. မြန်မာတွေအစားများတဲ့ ငပိ/ငခြောက်/ပုဇွန်ခြောက်တွေမှာ သန့်ရှင်းပိုးမွှားကင်း အဟာရဖြစ်အောင်.. R&D လုပ်ပေးသင့်တာပါ။
မြန်မာ့ခွေးတွေကနေ (ကမ္ဘာ့ကင်ဆာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးဖြစ်လာတဲ့) မြန်မာလူမျိုးဘ၀/အသက်တွေအများကြီးကယ်ပေးနိုင်အောင်.. ပြုသင့်ပါကြောင်း..
ခွေးသာဓု၊ လူသာဓု၊ နတ်သာဓုခေဓကြမှာပါ..။
စကားအတင်းစပ်.. ခွေးတွေ ပြည်ပ ရောင်းချတာကို (သနားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး.. ) ကန့်ကွက်နေတဲ့ “ဗြွတ် သူတော်ကောင်း”များကိုလည်း.. အိပ်စ်ပို့လုပ်သင့်ကြောင်း…
ကို နွေ ဦး ရေ
နောက် ဆုံး မ တော့
ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ပဲ လက် ညှိုး ထိုး ရ မ လို လို ပါ က လား
အဲ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကလူတွေ မသနားတတ်ဘူး
သူတို့တွေ ကသူတို့အတွက်ဘဲ ကြည့်တာ..
ကျွန်တော်တိှုျီ့ကလူတွေက ဆင်းရဲကြတော့ ကိုယ်ခြင်းစာကြတာ..။
ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဗျ ကိုနွေဦးရ။ လောကကြောင်းနဲ့ ဓမ္မကြောင်းလေးကို နည်းနည်း ခွဲခြားနားလည်ဖို့ လိုတယ်ထင်တယ်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးက နွားမေတ္တာစာ ရေးတုန်းက ကပ်ဖဲ့တိုက်ချင်တဲ့ ဒကာမတယောက်က လျှောက်ဖူးတယ်တဲ့။ ဆရာတော်က နွားသတ္တဝါတွေ ကယ်မယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ သတ္တဝါတွေ အပေါ်မှာ ဆရာတော့် မေတ္တာ မျှတပါရဲ့လားလို့ မေးတော့ ဆရာတော်ကြီးက အေးကွယ် ငါ့မှာ တရားစာအုပ်တွေရေးရ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်လှည့်ပြီး ကပ်ရောဂါတွေ ကာကွယ်ရဆိုတော့ နွားလေးတကောင်ပဲ အနိုင်နိုင်ဆွဲရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ဒကာမတို့ ကယ်ကြပါ ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်တဲ့။
ကယ်တဲ့လူကလည်း သူတတ်နိုင်တာလေး အရင်ကယ်တာနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးကို ကယ်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ ရတာလေး အရင်ဆွဲရတာနဲ့ တူပါတယ်။ အားလုံးကို ကယ်နိုင်မှ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူလည်း ဘာမှလုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အားလုံးကို ကယ်နိုင်မှာမှ မဟုတ်တာ။
ဆရာတော်က မမှားဘူးနော်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူရေးတာက မေတ္တာစာသက်သက်။ သူက အာဏာပိုင် မဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာရပ်ခံတာပဲ။ မလုပ်လည်း သူဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ သူက ဓမ္မကြောင်း သက်သက်ပဲ။
အဲဒါကို ဝန်ကြီးချုပ်က နွားတွေ မသတ်ရဖူးလို့ အမိန့်ထုတ်ပြီး နွားသားကို တိုးတိုးသား ဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ ဓမ္မကြောင်းနဲ့ လောကကြောင်းကို ရောလိုက်တာဗျို့။ သူက အဲဒီလို အာဏာနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ သူက အာဏာပိုင်ပဲ။ ကိုယ်တိုင် မလုပ်ရက်ရင် မသိချင်ယောင်ဆာင် နေမှရမှာပဲ။ ပြောရရင် ရှင်ဘုရင်တို့ ဘာတို့အလုပ်ကလည်း ဓမ္မကြောင်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ သိပ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးနဲ့ တူတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဘုရားအလောင်းတွေ တောထွက်ကြတာ နေမှာပေါ့။ ဒါတောင် အဲဒီအလုပ်က လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ ပေါလွန်းလို့ ရာဇဝင် တလျှောက်လုံး ရိုက်သတ်လို့ မကုန်နိုင်ဘူးပဲ။
ဘုရားတောင် ပါဏာတိပါတာသီလကို ဟောပေမယ့် သူ့ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရင်တွေကို နိုင်ငံတော်ထဲက သားသတ်သမားတွေ မုဆိုးတွေကို အမိန့်နဲ့ မလုပ်ရဖူးလို့ တယောက်မှ မတားခိုင်းဘူးလေ။ ပြောလို့ မရနိုင်တဲ့လူတွေ ရှိမှန်းသိတာကိုး။ ဘုရားတောင် ဆုံးမဖို့ လက်လျှော့ထားရတဲ့ လူတွေ ရှိနေတာကိုး။
ကဲ ဒီတော့ လောကကြောင်းအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အုပ်ချုပ်သူ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ငရဲအကြီးခံပြီး လုပ်ပေတော့။ မလုပ်ရဲရင် လုပ်ရဲတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့လူကို လွှဲပေး။ ကယ်ချင်တဲ့ လူကလည်း အကုန်လုံး ကယ်နိုင်ရင်ကယ်။ မကယ်နိုင်ရင်တော့ တတ်နိုင်တာ ကယ်ပေတော့။
အဲဒီမှာ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို ကယ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ အဲဒါကလည်း အခက်ဆုံးပဲ။ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို ကယ်ဖို့ကျတော့ တနိုင်လောက်နဲ့ မရတော့ဘူး။ သူကလည်း သတ္တဝါထဲမှာလည်း အဆင့်အမြင့်ဆုံးဆိုတော့ လိုအပ်ချက်တွေကလည်း အများဆုံးပဲ။ တနိုင်သမားကတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အစိုးရ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုကပဲ လုပ်နိုင်တာမျိုး။ ဒါတောင် လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေကိုလည်း ခိုကိုးရာမဲ့လေးတွေကို ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကယ်ထားတာ တော်တော်များတယ်ဗျို့။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို နေရာတွေ မနည်းဘူး။ တခုတော့ ရှိတယ်ပေါ့လေ။ Facilities တွေ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မပြည့်စုံဘူးတော့ ဘာတို့တော့ ရှိမှာပေါ့လေ။ သူကလည်း လုံးဝမလုပ်နိုင်တာနဲ့ စာရင် နိုင်တာလေး လုပ်ရတာကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒါမျိုးကို ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လည်း ဝေဖန်မယ့်လူက ဝေဖန်မယ့်အစား ကိုယ့်ရှိတာလေး သွားလှူလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ပြောစရာလေး တခုကျန်သွားလို့ ကိုနွေဦးရေ။ ကျန်တဲ့ နွားတွေ ကြက်တို့တော့ မသိဘူး။ သူတို့လည်း အတူတူနေမှာပါပဲ။ ခွေးတွေကတော့ လူတွေလိုပဲ ဘဝတဏှာ ရှိတယ်ဗျ။ သူတို့လည်း လူတွေလိုပဲ သေရမှာ ကြောက်တယ်ဗျ။ ဟိုတပတ်တုန်းကတောင် ခွေးတကောင်ကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင် ဆိုင်ကယ်က ဝင်တိုက်တာ။ ဆိုင်ကယ်က မောင်းအလာ ခွေးက ဖြတ်အပြေးပေါ့ဗျာ။ ဆိုင်ကယ်သမားလည်း နှစ်ပတ် သုံးပတ်လည်ပြီး လမ်းပေါ်လဲကျပေါ့။ လူတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ပွန်းရုံပဲ့ရုံပါပဲ။ ခွေးလည်း ဆိုင်ကယ်ကြိတ်ခံရတော့ လမ်းပေါ်မှာပေါ့။ ချက်ချင်းမသေဘူးဗျ။ အော်လည်း မအော်နိုင်ဘူး။ ဒီကောင် ထဖို့ကြိုးစားတယ်။ ထလို့လည်း မရတော့ဘူး။
အဲဒါ သူဘာလုပ်သလဲ သိလား။ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ လူတိုင်းကို မျက်လုံးနဲ့ လိုက်ကြည့်ပြီး အမြီးလေး ရမ်းပြရှာတယ်ဗျ။ သူများတော့ မသိဘူး။ ကျနော်တော့ သံဝေဂ ရမိတယ်။ သူသေမှာ ကြောက်ရှာတာကိုး။ ဘဝတဏှာပေါ့ဗျာ။
လိုတာလေးတွေ မသိတာလေးတွေ အတွေးဖြန့်စရာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးလို့
အဲ ပြောဖို့ ကျန်သွားပြန်ပြီ ဆောရီးပါ ဆောင်းပါးရှင်ရယ်။ ဒါကတော့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ရင်တောင် ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးမို့ပါ။ ကျနော်သိသလောက် ဗုဒ္ဓဝါဒအရတော့ ပါဏာတိပါတာက အကောင်ကြီးလေလေ အပြစ်ကြီးလေလေပဲ။ ယေဘူယျပေါ့ဗျာ။ ဂုဏ်ကြီးရင်လည်း အပြစ်ကြီးတယ်။ ဥပမာ လူဆိုရင် ကိုယ်ကျင့်သီလရှိသူ စသဖြင့်ပေါ့။
ခြင်တို့ ယင်တို့ ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေကို ရိုက်သတ်ရင်လည်း ပါဏာတိပါတာတော့ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နွားတို့ ဘာတို့ကျတော့ ပိုအပြစ်ကြီးသွားတယ်။ ခွေးတို့ ကြက်တို့လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ သတ်လို့မရဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက ခြင်တို့ ယင်တို့လို အလွယ်တကူ သတ်လို့မရတော့ ကာယကံရော မနောကံရော တော်တော်လေး အားထုတ်ရတာကိုး။ အဲဒီတော့ အားထုတ်တဲ့ စေတနာကြီးလို့ သူကတော့ ပိုအပြစ်ကြီးတယ်။ အကျိုးပေးလည်း ပိုကြီးတယ်ပေါ့။
အဓိကကတော့ စေတနာပါမပါရယ် စေတနာ အနည်းအများပေါ်မှာ မူတည်တာပါပဲ။ စေတနာ မပါရင်လည်း ကံမမြောက်ဘူးပေါ့။ ဘုရားလက်ထက်က စက္ခုပါလမထေရ်ဟာ ရဟန္တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မထေရ်ဟာ မျက်စိမမြင်လို့ ပိုးကောင်ကလေးတွေကို နင်းမိရှာတယ်။ အဲဒါ ရဟန်းတွေက ဘုရားကိုတိုင်တော့ မြတ်စွာဘုရားက “ချစ်သားတို့ စက္ခုပါလမထေရ် ပိုးမွှားတွေကို သတ်တာကို သင်တို့ မြင်ကြသလားလို့” မေးတော့ ရဟန်းတွေက မမြင်ပါဘူးဘုရားလို့ ဖြေတော့ “အေး ချစ်သားတို့ သင်တို့ မမြင်သလို မျက်စိမမြင်ရှာတဲ့ စက္ခုပါလဟာလည်း ထိုပိုးမွှားတွေကို မမြင် ရဟန္တာတို့တွင် သူတပါးတို့ကို သေစေလို့တဲ့ ဆန္ဒမရှိလို့” မိန့်သတဲ့။
အဲဒါမှာ ဂျိန်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒကွာသွားတာပဲ။ အမှန်တော့ မြန်မာထဲတွင် ဂျိန်းဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ မရှိလို့ ပြောလို့ရနိုင်လို့ ကျနော်ဒီလိုရေးတာပါ။ ဂျိန်းကျတော့ စေတနာပါပါ မပါပါ မတော်တဆလည်း အပြစ်ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ အသက်ရှူတဲ့ နေရာတောင် နှာခေါင်းကို အဝတ်နဲ့ အုပ်ပြီးရှူတယ်ဆိုပဲ။ ဗုဒ္ဓဝါဒအရတော့ လေထဲမှာ ပိုးမွှားလည်း ကိုယ်ကမမြင် အသက်ရှူနေတုန်း ကိုယ့်နှာခေါင်းထဲ ဝင်သွားပြီး သေသွားလည်း ကိုယ်ကမသိ အသက်ရှူတုန်းလည်း သူတို့သေပါစေဆိုပြီး ရှူတာမဟုတ်ဘူးလေ။ စေတနာ မပါဘူးပေါ့။ အဲဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဝါဒအရ အစွန်းတဘက်ရောက်သောနည်းပေါ့ဗျာ။ တနည်း ကပ်သီးကပ်သတ်တွေးတဲ့ လူတွေပေါ့ဗျာ။
နောက်တခုက လူတွေ နေမကောင်းလို့ ဆေးသောက်ရင် ဘယ်သူမှ အကုသိုလ် မဖြစ်ဘူးတဲ့။ မိုးပြားဂိုဏ်းဆရာတွေကလွဲရင်တဲ့။ လူတိုင်းက ဆေးသောက်ရင် ကျန်းမာဖို့ ဆိုပြီး သောက်ပေမယ့် မိုးပြားဂိုဏ်းဆရာတွေကျတော့ ငါ့ကိုယ်ထဲက ဘာကောင်ကြီးကို သတ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားပြီး ဆေးသောက်လို့ သူတို့ကတော့ ဆေးသောက်တိုင်း အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဆရာ ဦးညာနကို အစိုးရက ထောင်ထဲမှာ ဆေးလုံးဝ ကုမပေးဘူးလို့ ပြောတာပဲ။ သာဓု။
ဆင်းရဲလို့ ပညာမဲ့ ကိုယ်ဂျင်းဆာတရားခေါင်းပါးကုန်တယ် ပြောဗျံလည်း တဝက်တဗျက်ပဲ မှန်မယ်.. ချမ်းသာလာတဲ့ အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ ရသာတဏှာအတွက် တိရစ္ဆာန်တွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်စားသောက်ခြင်းဓလေ့ ထွန်းကားနေတယ်။ ထုံးတမ်းဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၊ ဥပဒေအာဏာ သက်ရောက်မှု (ဒါက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တယ်) စတာတွေ ဟန်ချက်ညီမှ ယဉ်ကျေးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဂျီးသား သတ်မှတ်လို့ရမယ်…။ တိရစ္ဆာန်တွေကို မသတ်ခင် အဲသလို နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်နေတာ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရား ဘုရားနဲ့ လူအခြင်းခြင်တောင် ကြီးနိုင်ငယ်ငြင်း ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်နေဂျတာ… သိပ်တော့မလွယ်…. သဂျီးပျံလာမှ လေးခွနဲ့ ပစ်ချရမှာပဲ….
လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသား နဲ့ အသီးအရွက် ကိုမျှတအောင် စားရမယ်ဆိုတော့ အသားအတွက် တိရိစ္ဆာန်တွေကို သတ်ကာ စားနေကြ ရမှာပါ။ အဲဒီလိုဘဲ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ရောဂါဖြစ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်း လူတွေကိုမကူးဆက်အောင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်မှု ဆိုတာလည်း လိုအပ်ရင်လုပ်နေရမှာဘဲလေ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လောကမှာ တန်းဖိုးအထားဆုံးက လူ ဖြစ်နေတာ ဘဲကိုး။ ဒါကြောင့်လည်း လူ နဲ့ တိရိစ္ဆာန် ယှဉ်ကာရွေးရင် လူ ကိုဘဲရွေးကြ တာပါ။ အဲဒီတော့ တရုတ်ပြည်ခွေးပို့ တာနဲ့ပက်သက်ပြီး တရုတ်တွေက ရက်စက်တာလား မဟုတ်ဘူးလေ သူတို့က ခွေးကို တိစ္ဆာန်တစ်ခုရဲ့ အသားအနေနဲ့စားတာပါ။ ခွေးကိုသနားတဲ့သူက ကြက်သားတော့စားရင် သတ္တ၀ါအသက်အရ တစ်ခုချင်း အတူတူ ပါဘဲ။ အဲဒီမှာတစ်ခုပြောချင် တာ လမ်းဘေးမှာ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ ရှိနေတယ် သူတို့ကို သနားကြ လို့ စောက်ရှေက်ရေးလုပ်ကာ ကျွေးတယ် ကုသိုလ်ရမယ်ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီခွေးလေခွေးလွင့်က ကိုယ်အိမ်ရှေ့ပေါက်တည့်တည့် မစင်စွန့်ရင် လက်ခံမလား အဲလိုဘဲ သူများအိမ်ရှေ့ မစင်စွန့်ရင်ရော ခုနကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာသာ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတွေး ကြည်။ ပြီးတော့ လမ်းသွားနေတဲ့ ကလေးတွေ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ကိုက်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ အကိုက်ခံရတဲ့သူအနေနဲ့။ တကယ်တော့ ခွေးလောက်တောင် အနပ်မမှန်တဲ့ အရွယ်မရောက် လူတွေ၊ ရောဂါခံစားပြီး ငွေမရှိရှာတဲ့ လူ တွေ အကူအညီလိုနေတာ ဒု နဲ့ ဒေး ရှိနေကြပါတယ်။ ကျုပ်ဆိုရင်တော့ လူသားတွေရဲ့ အကျိုးနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ လူ အတွက်ဘဲ စဉ်စားပေးရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါရဲ့။